Vaovao - Ny toetra sy ny fanasokajiana ny kapila fanapahana / kapila fanapahana, ny habetsaky ny fampiasana ny kofehy fanapahana.
Ny toetra sy ny fanasokajiana ny kapila fanapahana / kapila fanapahana, ny habetsaky ny fampiasana ny kofehy fanapahana.
Ny toetra sy ny fanasokajiana ny kapila fanapahana / kapila fanapahana, ny habetsaky ny fampiasana ny tapa-kapoka:
Amin'ny fiainana isan'andro, raha mitandrina azy isika dia matetika misy ny fanapahana ny haingon-trano. Manapaka ny gorodona, vy, hazo, na fitaovana hafa amin'ny endriny irina izy io. Ho an'ny indostrian'ny fanodinana vy, ilaina ny milina fanapahana vy, nefa koa karazana milina fanapahana manana fahaizana matanjaka ankehitriny. Ny lobolobo dia manapaka. Ireo fitaovana marokoroko amin'ireo tapa-damba dia mampiseho fa an'ny kodiarana fitotoana izy ireo. Ireo singa fototra ao aminy dia ny moka sy ny resina. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanapahana vy tsotra, vy tsy metaly ary fitaovana tsy metaly hanatrarana ny vokatra fanapahana tadiavina. Ravina manify boribory ny endriny.
Ny fisafidianana fitaovana amin'ny fanapahana fanapahana dia manana ny mampiavaka azy, indrindra ny fibre amin'ny vera sy ny resina. Ireo fitaovana roa ireo dia ampiasaina hanamboarana fitaovana fanamafisana. Ny vokatra vita dia manana kalitao tsara, tanjaka avo lenta, fanoherana ny fiatraikany ary hery hiondrika. Ampiasaina betsaka amin'ny famokarana sy ny fanakanana vy tsotra, vy tsy metaly, vy ary tsy metaly izy ireo. Ny fisafidianana fitaovana tsara sy ny haitao mahafinaritra dia manome antoka ny fahombiazan'ny fanapahana faratampony amin'ireo zavatra fanapahana.
Araka ny voalazan'ilay fitaovana, ny fanapahana kapila dia mizara ho ampahany amin'ny fanapahana resina fibre sy ireo fanapahana diamondra.
1. Ny resina fanapahana resina dia vita amin'ny resina, atambatra amin'ny fitaovana isan-karazany. Ampiasaina matetika amin'ny vy vita amin'ny vy, vy tsy misy fangarony ary fitaovana fanapahana sarotra hafa, ary ny fahombiazan'ny fanapahana azy dia manan-danja manokana. Rehefa manapaka dia azo zaraina ho karazany roa izy, ao anatin'izany ny fanapahana maina sy ny fanapahana lena. Ity karazana ravina fanapahana ity dia tsy maintsy mampiasa marimarina kokoa. Ankoatr'izay, mifanaraka amin'ny filan'ny fanapahana, ny fitaovana sy ny hamafin'ny tapa-kapoka dia voafantina, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny fanapahana ary mamonjy ny vidiny.
2. Volo fanapahana diamondra. Ity koa dia fitaovana fanapahana, izay hita matetika amin'ny indostrian'ny fanorenana, noho izany ity karazana fanapahana ity dia ampiasaina betsaka amin'ny fikarakarana ireo fitaovana mafy sy mora vidy toy ny vato, beton, lalana vaovao sy taloha, seramika, sns. diamondra fanapahana diamondra tena tsara dia misy ampahany roa: lohan'ny substrate sy cutter. Ny matrix no ampahany manohana indrindra, izay ampiasaina koa hamatotra ny lohan'ny fanapahana, raha ny fonosana diamondra kosa mifono vy ao anatin'ny lohan'ny fanapahana. Ny lohan'ny fanapahana dia ampiasaina amin'ny dingan'ny fanapahana, satria tapaka matetika izy io, ka ny loha fanapahana dia holaniana ampiasaina, fa ny matroka kosa dia tsy hanana fatiantoka. Mazava ho azy, ny lohan'ny fanapahana dia mitana andraikitra amin'ny fanapahana satria misy diamondra io. Ny diamondra no fitaovana mafy indrindra hita ankehitriny. Raha manosotra ilay zavatra ilaintsika hokapaina eo amin'ny lohan'ny fanapahana izy dia hanapaka ilay zavatra.